Akayingeni eyokuya emicimbini amenywa kuyona | Isolezwe
Akayingeni eyokuya emicimbini amenywa kuyona
intandokazi / 7 March 2019, 1:27pm / ZANELE MTHETHWA
AKAKUKHONZILE ukuba wuvanzi umdidiyeli woZalo ophuthelwe nawukuyokwamukela indondo yalo mdlalo wodumo kwithelevishini.
UNkk Gugulethu Zuma-Ncube (34), oyindodakazi kaMnuz Jacob Zuma noDkt Nkosazana Dlamini-Zuma, uthe yindlela abakhuliswe ngayo eyenza ukuthi bawagweme amehlo abantu. Yize abanye becabanga ukuthi wakhula etotoswa, utshele Isolezwe ukuthi waqala ezikoleni zaseNkandla.
“Ekhaya sonke saqala ezikoleni zasemakhaya futhi besifana nezingane zonke. Ngiyakwazi ukudlala ngize ngingcole nokubuya ekhaya ngifakwe isibhaxu. Asikufakanga nasekhanda ukuthi abazali bethu sebengabaholi,” kuchaza uGugulethu.
Uthe indlela angayihambi ngayo imicimbi ngisho emenywa kwemikhulu akayi. Bekumele ayolanda indondo yeBest Producer kumaSouth African and Television Awards (Safta) kodwa wangaya.
“Bekungeyesithathu le ndondo emunxeni ofanayo. Ngihlala ngingekho futhi ngisuke ngazi ukuthi bazongiphathela abayile,” kusho yena.
Ukuba sezindabeni ngesikhathi kuqala umdlalo Uzalo nakho kube nomthelela ekutheni angayi emicimbini. Ukubeke kwacaca ukuthi uyazisaba izintatheli futhi akekho ngisho ezinkundleni zokuxhumana. Yize kwaba nomsindo ngokuxhaswa kwalo mdlalo kuthiwa yingoba ezalwa umengameli, okumjabulisayo wukuthi ukulandelwa kwawo kakhulu kuwumayihlonze. Uveze nokuthi usuzobukwa ngisho phesheya. Uphinde abe umdidiyeli womdlalo iHostela nawo oqale ngelikhulu isasasa. Naye ukuqinisekisile ukuthi lo mdlalo uqale ngegiya eliphezulu.
Uthe uthole imiyalezo eminingi abalandeli bencoma. Uveze nokuthi uyasazi nesikhalo esikhulu ngokufa kukaMndeni obeyintandokazi. Uvele wahleka ebuzwa ukuthi kuzokwenzeka yini ukuthi lo mlingiswa avuke njengakweminye imidlalo yethelevishini.
“Ngiyayibuka impela ithelevishini kodwa angikopeli kweminye imidlalo. Ngikholelwa ekwenzeni ngendlela yami. Ngiyakholelwa ekuvumbululeni amathalente amasha kubadlali yingakho nakuZalo abaningi sebeshiyile. Ngisho uMndeni ngeke abuye,” kusho yena.
UGugulethu, owaqala ngokuba wumlingisi kwiSidingo, uthe abazali babengayizwa eyokungena kulo mkhakha. Uthe wabona ukuthi unekhono lokulingisa ngoba ubekwazi ukulingisela abantu.
Wagcina eyokwenza izifundo zeDrama e-University of Cape Town.
Uthe akaze alingise emidlalweni yasesiteji kodwa wayeqala kwithelevishini. Isifiso sakhe esikhulu manje wukwenza umdlalo wethelevishini okhuluma ngeChess ngoba uyibone kuyise ukuthi iyawuvula umqondo.
Uthe uma engekho emsebenzini ubukela ithelevishini ahlale nomndeni.
Uthe akathandi ukungena ezindabeni zakhe zangasese kodwa wakuqinisekisa ukuthi akanayo ingane.